တင်ဒါကြေငြာချက် - TCDD mir ဇmirဆိပ်ကမ်းအထိုင်နှင့်ပုန်းရန်အတွက် - RayHaber
« တင်ဒါကြေငြာချက် - ငလျင်အန္တရာယ်တွက်ချက်မှုများနှင့် Erzincan ဘူတာရှိအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုအတွက်အတည်ပြုအစီရင်ခံစာများကိုပြင်ဆင်ခြင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတုရု၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် signal စနစ်များ Alignment အတွက်Ödemişဘူတာလမ်းမကြီး »
STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးတူရကီအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသမ္မတနိုင်ငံ
TCDD İzmirဆိပ်ကမ်း 22-23 127 Inter-မီတာကမ်းနားစီးတံတားနှင့် Filler ၏ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 4734 ၏ Noli သို့ပြန်သွားရန် Yard လုပ်ငန်းခွင်ပြီးပြီဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 422911
က) လိပ်စာ: စီးပွားရေးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်မှုဌာနမှ Hippodrome Anafartalar Caddesi ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအဘယ်သူမျှမရပ်ကွက်:306340 Anafartalar Mah ။ ALTINDAĞ / တူရကီ
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 4171 - 3123115305
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: satinalma@tcdd.gov.t
https://ekap.kik.gov.tr/ekap/: ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်
TCDD İzmirဆိပ်ကမ်း 127 တန်ချိန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုက်ဘ်ဆိုက်များများအတွက်ယူနစ်စျေးနှုန်းလေလံအကဲအမှူးပြအလုပ်ပစ္စည်းများကိုပမာဏအတွက်အထိုင်များနှင့်အမျိုးအစားကိုပြန်ပုံ။
ခ) Place: Izmir
ပြက္ခဒိန်ရက်ပို့ဆောင်မှုတည်နေရာ (လေးရာ့ငါးဆယ်) မှ 450: ဃ) အချိန်လုပ်ဆောင်ပါ။
က) Place: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုညီလာခံခန်းမ (1 ကြမ်းပြင်) Hippodrome Caddesi အဘယ်သူမျှမ: ။306330 ရောဂါ-Çankaya / တူရကီ
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 16.10.2019 - 10: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းအတွက်ကမ်းနား၏စီးပွားရေးဖော်ဆောင်ရေးနှင့်ပြန်လှသင်တန်းကိုဖြည့် 13 / 09 / 2019 TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းကမ်းနားနှင့်ပြန်သွားရန် Yard TCDD İzmirဆိပ်ကမ်း 22-23 အမှတ် Piers လက်ဝါးကပ်တိုင် 127 မီတာစီးတံတားနှင့်ပြန်သွားရန် Yard ၏ဖြည့်စွက်စီးပွားရေး TC STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုပြုလုပ်ခြင်းအဆိုပါပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 19 အပိုဒ်အရသိရသည်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက်ဖြည့်ပါ ဒါဟာပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 422911 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: စီးပွားရေးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်မှုဌာနမှ Hippodrome Anafartalar Caddesi ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအဘယ်သူမျှမရပ်ကွက်:306340 Anafartalar Mah ။ ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းများနှင့် ...
Izmir ဆိပ်ကမ်း Piers ၏ Stocktaking - စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ကန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အောင်မှပြောင်းရွှေ့ 27 / 11 / 2014 TCDD3။ ခရိုင်၏ Izmir ဆိပ်ကမ်း Piers ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ - အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ကန်ထရိုက်များ၏ဆုများအတွက်တင်ဒါများဆုရှင်မှပြောင်းရွှေ့စီမံကိန်းတူရကီပြည်နယ်မီးရထားနှင့်အတူလင်းပိုင်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုက (TCDD)3ကြပြီ။ စုဆောင်း 30 စက်တင်ဘာလ 2014 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်သဖြင့်ဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု, ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု "Izmir ပစ္စုပ္ပန် 20 ဆိပ်ကမ်း - - ထိုကမ်းနား၏ 22 အမှတ် Stocktaking, 10 19 Noli အဆိုပါကမ်းနား၏ Displacement, 127 မီတာ Ro-Ro စီးတံတားနှင့် 450 မီတာလုပ်ခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း၏ကမ်းနား၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်း" ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ဒါဟာ 691.455,74 20 နိုဝင်ဘာလနှင့်အတူ£လင်းပိုင်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုကများ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ ...
TCDD Derince ဆိပ်ကမ်းကမ်းနား၏အမှတ် 3, အကာအရံများနှင့်လင်းပိုင်တင်ဒါကောက်ချက်ချ Making 17 / 12 / 2012 2012 / 1120523တင်ဒါအမှတ်အမှတ် TCDD Derince ဆိပ်ကမ်းကမ်းနား, တင်ဒါ Making အကာအရံများနှင့်လင်းပိုင်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ အနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်: £ 4.309.810,23 2.874.669,62 £စက်မှုလုပ်ငန်းLİK၏ŞAHİNLERİNŞ.MADENCနှင့်အတူနုကမ်းလှမ်းမှုကိုTİC.Lမှ TD.Ş. ခဲ့သည် သူကအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 2012 / 112052 1) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးက) နေ့စွဲ: 25.09.2012 ခ) ရိုက်ထည့်ပါ: စီးတံတားတစ်ဦးအကာအရံနှင့် DOLFI ကြောင်းပါလိမ့်မယ်ကလေးမွေးဖွားပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနဝယ်ယူရေးဌာနတင်ဒါမှတ်ပုံတင်နံပါတ်အတွက်ရလဒ် ANNOUNCEMENT ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်က c) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: ပွင့်လင်းဃ) ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်: 4.309.810,23 £ 2) ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏နူးညံ့မှဘာသာရပ်) အမည်: အဆိုပါအကာအရံများ VIA3DERİNCEဆိပ်ကမ်းစီးတံတားနှင့် DOLFI ...
Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းဆိပ်ကမ်းဆီမနက်ဖြန်လေလံတင်ရောင်းချပြုသောအမှု 29 / 09 / 2014 လေလံတင်ရောင်းချ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းဆိပ်ကမ်းဆီမနက်ဖြန်ပြုမိ: Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်း Ro-Ro သင်္ဘောစီးတံတားတင်ဒါမှာ berthed နိုင်ပါတယ် TCDD Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှုမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်မနက်ဖြန်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အသစ်ကသတ်မှတ်ချက်များအသစ်တစ်ခုကိုနူးညံ့၏သင့်လျော်သောအုပ်ချုပ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များမရှိခြင်းကြောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းအောက်ပါပွငျဆငျနှင့်အတူ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်း Ro-Ro သင်္ဘောများကိုလည်းအထိုင်တွင်စိုက်ရန်နု dock ကိုဖွင့်လှစ်။ တင်ဒါအသစ်အတွက်သတ်မှတ်ချက်မနက်ဖြန် (စက်တင်ဘာ 30) ကျင်းပလိမ့်မည်နှင့်အတူ TCDD ၏ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာဆိပ်ကမ်း Izmir Ro-Ro တန်ဆာနူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုမှာဆိုက်ကပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ပြီးခဲ့သည့်လကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း, သင်္ဘော Izmir ဘဏ်ခွဲ, TCDD İzmir Alsancak ဆိပ်ကမ်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Polatli ရထားဘူတာ Yard ပြည်ထဲရေးနှင့်ပြင်ပနဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ်ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှု Elucidation နှင့်အတူလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 29 / 06 / 2016 Polatli ရထားဘူတာအတွင်းပိုင်း Fields နှင့် Away Elucidation ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ LED မီးအိမ် 4734 ၏ Elucidation ဧည့်ခံ 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်အတူ mounting ပြည်တွင်းနဲ့ LED ဆီမီးİğciler YHT စတော့အိတ် Yard နှင့်အတူသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) YHT ဒေသန္တရရုံး Polatli ရထားဘူတာအတွင်းပိုင်းကိုလယ်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်လယ်ပြင်ပြင်ပမှာပါလိမ့်မည် အပိုဒ်အားဖြင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 237965 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Anafartalar Mah ၏ YHT TCDD ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်3ALTINDAĞဘူတာ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 1735 ...
TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, TCDD Izmir ဆိပ်ကမ်း, TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းကမ်းနား၏ချမှတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လှသင်တန်းကိုဖြည့်
ယ်ယူခြင်း၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့် Inventory Control ကိုဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမ (အခန်းတစ်ခန်းအမှတ်3xnumx.kat)
တူရကီ, Altındağရပ်ကွက် Hippodrome Anafartalar Caddesi အဘယ်သူမျှမ:306000 Türkiye + Google Maps ကို
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Polatli ရထားဘူတာ Yard ပြည်ထဲရေးနှင့်ပြင်ပနဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ်ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှု Elucidation နှင့်အတူလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: (သွန်းသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့2Piers ရေတွက်အပိုင်းပိုင်းကုန်တင်နိုင်စွမ်း၏3တန်ချိန်မှHaydarpaşaဆိပ်ကမ်း6နှင့် 60) ဆိပ်ခံတံတားအဘ၏ထောက်ပံ့ရေးနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းကို 4,5 နှင့်6အမှတ်အတူ ro-ro dock area ထဲတွင်ပျက်စီးသွားသောဧရိယာ၏ concreting အလုပ်